Jaamacadda Aksaray waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaJaamacadda Aksaray waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta
2547 xubnood ayaa la shaqaaleysiin doonaa iyada oo la raacayo qodobbada la xiriira ee Sharciga Tacliinta Sare ee lambarkiisu yahay 2914, Xeerka Shaqaalaha Tacliinta Sare ee no.
Websaydhka Waaxda Shaqaalaha ee Jaamacadda oo leh shuruudaha lagu sheegay Qodobka 657aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee no.http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Waa qasab in la buuxiyo shuruudaha ugu yar ee lagu qeexay / Tilmaanta Kordhinta iyo Ballan-qaadista kuliyadaha Aksaray University yayınlan lagu daabacay qaybta Macluumaadka / Dukumiintiga. Codsadayaasha waxaa baari doona Gudiga Qiimeynta Qiimeynta Tacliinta ee Başvuru si loo go'aamiyo inay buuxiyeen shuruudaha lagu qeexay Tilmaanta iyo shuruudaha gaarka ah ee lagu sheegay ogeysiiska.
Musharixiinta waxay u diyaar garoobi doonaan sida ku xusan tilmaamaha beri ee diyaarinta faylka balanta ee xubnaha Kuliyada yayınlan oo lagu soo daabacay isla isla shabakada;
1) Macalimiinta, codsadayaashu waxay cayimayaan waaxda ay u codsan doonaan; ku darista 1 (hal) faylka muuqaalka ah oo ay kujiraan buugaagta manhajka, shahaadada lashaqeynta cilmiga, cilmiga sayniska iyo daabacaada ay kujirto shaqada ugu weyn ee cilmi baarista iyo 6 (lix) CD ama USB oo kujira dukumintiga faylka kujira,
2) Codsiyada macalimiinta la shaqeeya, codsadayaashu waxay cayimayaan waaxda ay u codsan doonaan; adoo kudareynaya 1 (hal) feylka jireed oo ay kujirto manhajka vitae, shahaadada cilmiga sayniska iyo cilmiga sayniska iyo daabacaada iyo 4 (afar) CD ama USB kujira dukumintiga faylka kujira,
3) Codsadeyaasha codsan doona xubnaha kuliyadaha qaybta waaxda iyo dhibcaha luuqada qalaad waxay muujinayaan arjiga; resume, shahaadada doctorate-ka iyo 1 (hal) feyl jireed oo ay kujiraan daraasado cilmiyeed iyo daabacado iyo 4 (Afar) CD ama USB kujira dukumiintiga faylka kujira.
Codsiyada waxaa lagu sameyn doonaa shaqsi ahaan 15 maalmood laga soo bilaabo taariikhda lagu daabacay Gazette Rasmiga ah.
Codsiyada lagu sameeyo boostada lama aqbali doono.
Qorista Shaqaalaha Akadeemiyada Aksaray ee Jaamacadda